Iintlanzi zezithixo zamaMoor | Ngeentlanzi
Ngokumalunga nokubonakala kwayo, ibonisa ubude obude obumhlophe obumhlophe kunye nemivalo emibini emnyama emzimbeni. Inomlomo omncinci kunye nomphunga obalaseleyo. Kule nto inqaku elimthubi elityheli kunye nombala ongasemva wamacala ayo. Impumlo yayo eyahlukileyo isetyenziselwa ukukhangela rhoqo ematyeni ulwandle.
El Iintlanzi zesithixo zaseMorish zifuna i-aquarium engaphezulu kweelitha ezingama-200 ngentlanzi nganye, kuba ukufuna kwayo isigxina ukutya kufuna itanki enkulu ngokwaneleyo ukuba ibe nendawo yokuqubha. Amaqondo obushushu afanelekileyo aphakathi kwama-24 nama-26ºC.
Ukunyanzeliswa kwayo kwi-aquarium kuya kuncitshiswa kwi-aquariums esele isebenza ixesha elide, kokukhona kungcono, kuba izityebi ulwelwe kunye iintsholongwane. Ziintlanzi ezifuna utshintsho lwamanzi ngokungagqibelelanga kunye namanzi akwimeko egqibeleleyo njengoko zinobuzaza kakhulu kwiammonia kunye nokwahluka kweemeko zasemanzini.
Umhombiso we-aquarium kufuneka wenziwe ngamatye amaninzi elinganisa ingqaqa. Inkqubo ye- Izibane kufuneka zibe namandla ukuze ube nakho ukuvelisa iingubo ze-algae apho izondla khona.
Ngokumalunga nokutya kwabo, nangona be-omnivores, isiseko sokutya kufuneka senziwe nge-algae kunye neziponji zekorale. Oku kutya kuya kuncediswa ligalelo lokutya okutyebileyo kwi-spirulina kunye nokutya okuneeprotein ezahlukeneyo ngohlobo lwe-shrimp, brine shrimp, krill okanye amaqhekeza amancinci eentlanzi ezimhlophe kunye ne-squid. Iyakwamkela ukutya okomileyo okugcinwe ngumkhenkce ekuhambeni kwexesha.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ngeentlanzi » Intlanzi » Iintlanzi zezithixo zamaMoor
Isifo esimhlophe esimhlophe kwintlanzi